အခမဲ့ဘင်ဂိုကစားပွဲ 10 ညစ်ညမ်းဂိမ်း–ဘင်ဂိုနှင့်အတူအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်း
ရုပ်ပြောင်ကာတွန်းစိတ်ကူးယဉ်များအတွက်အခမဲ့ဘင်ဂို 10 ညစ်ညမ်းဂိမ်း
ဒါကြောင့်ယုတ်စိတ်ကူးယဉ်၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်းကာတွန်းမှကြွလာသောအခါ,ဘင် 10 အသုံးအများဆုံးသူမြား၏တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်,အတူတကွငါ၏နည်းနည်းမြင်းနှင့်အတူ,အေးခဲ,မိသားစုကောင်လေးသို့မဟုတ်ငုံ. အကယ်၍အခြားကာတွန်းများသည်အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်များ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားလျှင်သို့မဟုတ်ရယ်စရာကောင်းသောကြောင့်၊ဘင် ၁၀ လိင်ဂိမ်းများသည်နဂါးလိင်ဂိမ်းများစွာကြောင့်လူကြိုက်များသောကြောင့်၊ဂြိုလ်သားအမျိုးမျိုးကိုလှည့်စားနိုင်သောဘင်၏စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်သည်။, သငျသညျအခမဲ့ဘင်ဂိုကစားပွဲပေါ်မှာဤကျော်ကြားကာတွန်းစီးရီးအပေါငျးတို့သအကောင်းဆုံးရုပ်ပြောင်တွေ့လိမ့်မည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အကောင်းဆုံးကိုစုဝေးစေခြင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်းအခမဲ့သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးစာကြည့်တိုက်မှာသူတို့ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်းပူးတွဲမျှကြိုးနှင့်အတူကြွလာ။ မသာကြောင်း,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တောင်မှဂိမ်းအတှေ့အကွုံမဆိုကိစ္စများမပါဘဲကြောင်းဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရှိသည်သမျှသောဂိမ်းများကိုစမ်းသပ်ပြီး။
ဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏စုဆောင်းမှုအတွက်သာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်သင်ပိုင်ဆိုင်စေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျအဘယ်သူမျှမဒေါင်းလုပ်သို့မဟုတ်အရစ်ကျနှင့်အတူသင်၏ဘရောက်ဇာသို့တိုက်ရိုက်ဤဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်မှဝင်ရောက်ခွင့်မရမီလိုအပ်မျှမှတ်ပုံတင်ရှိပါတယ်။ သင်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်တစ်ခုတည်းသောအရာသင် 18 သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်တဲ့ပုံစံ။ သင်ပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကိုကစားရန်ရင်းသင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းမည်သည့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။, လူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းမှတ်ချက်ကဏ္ဍများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏ဖိုရမ်ဘင်ဂိုက် 10 မျိုးနှင့်အခြားစိတ်ကူးယဉ်တွေအများကြီးနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ချည်ဆွေးနွေးမှုများအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသည်။
ဝဘ်ပေါ်မှာတွေ့သောအများအပြားအခမဲ့ဘင်ဂိုကစားပွဲ 10 ညစ်ညမ်းဂိမ်း
ကျနော်တို့အမာခံဘင်ဂိုကစားပွဲ၏ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်းဖန်တီးကျနော်တို့ကအတွက်အမျိုးမျိုးတွေအများကြီးရောက်စေဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်အများအားဖြင့်နဂါးလိင်ဂိမ်းများကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်,ဒါပေမယ့်သင်ကစားနိုင်မပျောက်ပျက်ညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်,ဘင်နှင့်သူ၏ဦးလေးနှစ်ဦးစလုံးဟာအများကြီးနှင့်အတူကမ်ဘာပျေါတှငျကမ်ဘာပျေါတှငျတင်းကျပ်စွာဖွင့်ဖြည့်အတွက်အလှည့်ယူပြီးနေကြသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်တွင်ပင်အချို့သောကိုယ်ဝန်ညစ်ညမ်းဂိမ်းရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုကိုလည်းသင်ဘင် 10 စကြဝဠာ၏ရှိသမျှသောမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဇာတ်ကောင်ရကြလိမ့်မည်သည့်အတွက်လိင်ဃာ၏စီးရီးနှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအစိတျအပိုငျးတှငျသငျသညျပိုငျးလိင်ဂိမ်းအတွက်သူငယ်၏နှင့်အတူတဦးတည်းလိင်အစည်းအဝေးများအပေါ်တဦးတည်းပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သင့္ရဲ႕ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္နဲ႔ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပုံစံႏွစ္ခုစလုံးမွာဆြဲေဆာင္မႈရွိႏိုင္ပါတယ္။အာရွခ်စ္သူေတြအတြက္ေတာ႔ အယ္လီဂရီ ႐ွိပါတယ္။ေနသာတာကသင့္ရဲ႕ငပဲကိုေကြးညႊတ္ေစပါတယ္။ေနသာတာကသင့္ငပဲကိုေကြးညႊတ္ေစပါတယ္။ငပဲအစိမ္းေရာင္နဲ႔ ကစားနည္းေတြ႐ွိပါတယ္။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအများစုသည်နဂါးလိင်တံပတ်ပတ်လည်ဆုံလည်နေကြသည်။ ဂိမ်းထဲမှာသင်ဘင်ဂို 10 စကြဝဠာထဲမှာမိကျောင်းအများအပြားအဖြစ်ကစားရလိမ့်မယ်။ သငျသညျလိင်အရေးယူစဉ်အတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်နှငျ့သငျလှယျကူပါလိမ့်မည်သောသူငယ်ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောသမျှသောပူပြင်းဖြစ်ကြသည်။ ဤဂိမ်းအချို့သည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးသူတို့နှင့်အတူလာပြီးလိင်ဒြပ်စင်များကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေကြသည်။ အခြားဂိမ်းကပိုချမ်းတုန်ဖြစ်ကြပြီးမိန်းကလေးများသင်သည်ထိုသူတို့ပေးခြင်းနေအပေါငျးတို့သဂြိုလ်သားငပဲခစျြလိမျ့မညျ။
ဘင် 10 လုံခြုံစွာနှင့်အတူအွန်လိုင်းရုပ်ပြောင်လိင်ဂိမ်းကစားပါ
ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေကိုအခြေခံပြီးတခြားရုပ်ပြောင်စိတ်ကူးယဉ်(၁၀)မျိုးကိုဖော်ပြထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်,ငါတို့သည်ငါတို့၏ကစားသမားဂိမ်းလောကီသားတို့သည်အထဲမှာအလုံခြုံဆုံးနှင့်လုံခြုံအတွေ့အကြုံကိုတဦးတည်းပေးသနားတော်မူ၏။ မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မှမမေးရသည့်အကြောင်းရင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုကိုစွန့်စားလိုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်သင်၏အမည်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာရှိသည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေါ်တွင်ဤဂိမ်းအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းနေသည်အဆုံးစာဝှက်စနစ်ဖြင့်လာသည်မှာသင်၏အိုင်ပီလိပ်စာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေမည်ဟုဆိုလိုသည်။